Ogaden News Agency (ONA) – HAD – Xasuuqii Malqaqa oo dib loo furay
HAD – Xasuuqii Malqaqa oo dib loo furay
Posted by ONA Admin	/ September 26, 2012
Xafiiska Hogaanka Arimaha Dibadda ee JWXO ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku cadeeyay in Qaramada Midoobay ay hadda ka hor dhagaha ka fureysatay War-saxaafadeedkii ay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya caalamka ugu sheegtay in xasuuq ba’an loo gaystay dadkii daganaa magaalada Malqaqa. Wuxuu sheegay HAD inay bayaankaa ay ku soo bandhigeen magacyada dadkii ay maxaysatada Liyub Boliska ku xasuuqeen magaaladaa, iyagoo ka codsaday Golaha Amniga ee QM gaar ahaan Xoghayaha Golaha Amniga in talaabo adag laga qaado Itobiya oo xasuuqa ka wada Ogadenya.
HAD wuxuu ku tilmaamay inay ahayd nasiibdarro in QM aanay talaabo ka qaadin codsigaa. Waxaan shaki ku jirin in aamuskii QM oo uu HAD ku tilmaamay inay ahayd shirqool loo dhigay shacabka Somalida Ogadenya uu ku dhiirtigaliyay Itobiya inay sii wado xasuuqa ay ku hayso shacabka Ogadenya. Wuxuu sheegay HAD inay sii laba jibaareen gumaysiga Itobiya xasuuqa ay ku hayaan shacabka iyagoo ka gaystay xasuuqya kala duwan goobaha kala ah Gunagado (February 2012), Gaashaamo (March 2012), Qoriile (September 6, 2012), iyo Xarshin (September 10,2012).
Wuxuu sheegay HAD in dhamaan xasuuqyadaa ay bayaan saxafi ah ka soo saareen una sheegeen caalamka tirada dadka lagu wax yeeleeyay goobahaa ee dhimasho, dhaawac, iyo qaar lala tagayb ah, iyagoo ka codsaday caalamka in wax laga qabto arintaa, hasa ahaatee aan juuq loo odhan. Waxaad moodaa ayuu yidhi HAD in Ogadenya aanay caalamkaba ka mid ahayn oo QM aanay masuuliyad ka saarnayn shacabka Ogadenya, oo xukuumadda Itobiya la siiyay fasax ay siday doonto ugu takrifasho Ogadenya.
Xukuumadda Itobiya waxay ka horjoogsatay Warbaahinta caalamka iyo Haya’adaha Madaxa-banaan (NGOs) inay tagaan Ogadenya taaso macnaheedu yahay inay ka qariso ra’yal caamka aduunka dambiyada ay ka wado Ogadenya. Hasa ahaatee, waayadan dambe dadkii u shaqaynayay xukuumadda Itobiya ayaa bilaabay inay ka soo baxsadaan, iyagoo soo qaaday caddaymo qaali ah oo muujinaya filim ahaan heerka uu gaadhsiisan yahay xadgudubka ay ciidamada Itobiya ka wadaan Ogadenya. Waxaa ka mid ah cadeymahaa la helay cajaladaha uu ka soo saaray Itobiya Cabdulaahi Xuseen oo ah nin dhalinyara ah oo xukuumadda u shaqayn jiray oo dhuumasho ku jooga dibadda.
Qaybtii ugu horeeyay filimadaa oo laga daawaday Swedish TV, wuxuu Cabdulaahi ku sharxay filimadii beenta ahaa ee labada saxafi ee Sweden Marin Shibbye iyo Johan Persson lagu maxkamadeeyay. Sida loo jilay riwaayadda beenta ah ee loogu qasbayo labada wariye inay ka qayb-qaataan filimada looga dhigay cadeymaha lagu maxkamadeeyay. Qaybta labaad waxaa lagu daawaday koox ciqaabaya dad shacab ah oo uu ka mid yahay ku-xigeenka madaxweynaha gobolka oo lagu magacaabo Cabdulaahi Yusuf Weerar ‘”Cabdulaahi Itobiya” kuwaasoo ka sheekaynaya sida ay dadweynaha iyo maxaabiista ay u ciqaabaan.
Qaybta 3xaad waxaa lagu daawaday Cabdi Iley oo la jooga koox maxaysatada Liyu-Boolsika iyagoo dhex socda tuuladii Malqaqa ka dib markay xasuuqeen shacabkii daganaa oo inyaroo ku soo hadhay haruufaya. Waxaa ka mid ah muuqaal aad u naxdin badin iyagoo ku tumanaya maydka qof shacab ah oo qori kaga mudmudaya wajiga maydka. Cabdulahi Xuseen oo ah wiilka keenay cajaladaha ayaa ka dhex muuqda filimka isagoo garab jooga cabdi iley. Wuxuu yidhi Cabdulaahi; “Caalamka ha ogaado. Waxaan sameeyay wuxuu samayn lahaa qofkii bani-aadam ah ee arkay waxaan soo arkay.”
Caddaymo xaqiiqa ah oo ku saabsan xasuuqii ka dhacay Malqaqa oo aan laga warwareegi karin ayuu tusay caalamka Cabdulaahi Xuseen aad ayaanan ugu mahadnaqaynaa. Maadaama caalamka uu ogaaday wixii ka dhacay Malqaqa, oo warbixintii aan ka soo saarnay June 2010 loo helay cadeymo miuuqda, waxaa la soo gaaray waqtigii talaabo laga qaadi lahaa arintaa oo dambiilayaashii ka dambeeyay lala xisaabtami lahaa.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya / Hogaanka Arimaha Dibadda